Idaacadda Duhurnimo waxaad qeybta hore ku maqli kartaa wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya iyo Caalamka. Qeybta danbe-na idaacaddu waxay idiin soo gudbinaysaa barnaamijyo ku saabsan dhalinyarada maanta. Jadwalka: Maalinle Wakhtiga maxalliga ah: 1:30 pm UTC: 1030 Muddada: 30
Idaacadda Galabnimo waxaad ku maqashaan wararka ugu danbeeya ee caalamka, barnaamijyo, ciyaaro, wareysiyo iyo waliba heeso. Jadwalka: Maalinle Wakhtiga maxalliga ah: 16:00 UTC, xilliga: 1300 Muddada: 60
Idaacadda Fiidnimo ee Evening Edition waxaad ku maqashaan wararkii ugu danbeeyey ee Soomaaliya iyo Caalamka, barnaamijyo iyo wareysiyo ka turjumaya dhacdooyinka waqtigaasi ka dhacaya daafaha Dunida. Jadwalka: Maalinle Wakhtiga maxalliga ah: 19:00 UTC, xilliga: 1600 Muddada: 60